Volunteer, Revolution & Money (ဘော်လန်တီယာ၊ တော်လှန်ရေးနဲ့ ငွေကြေး)
အခုဆွေးနွေးချင်တဲ့ အကြောင်းတခုက Volunteer အခမဲ့လုပ်ကိုင်ကူညီပေးခြင်း၊ တော်လှန်ရေး၊ အလုပ်အကိုင်နဲ့ ငွေကြေးဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒီသုံးခုက ကျနော်ကို ၀ိရောဓိဖြစ်စေပါတယ်။ ကျုပ်က အခု ပြည်ပမှာ (အစိုးရအဆို ပြည်ပြေး၊ ကျုပ်တို့အဆို တော်လှန်ရေးသမား) သူများနိုင်ငံမှာ ပုံစံမကျနဲ့ ခိုကပ်နေရတဲ့ကောင်ပါ။ ဒါကြောင့် ဒါကိုတဆက်တည်း ရေးလိုက်တာပါ။
ကျုပ်တိုင်းပြည်မှာ မနေနိုင်လို့၊ အဖမ်းခံရမှာ ကြောက်၍ ထွက်ပြေးခဲ့သူပါ။ တောခိုသော်လည်း တောထဲမှာမနေခဲ့ဖူးပါ (တောတောင်အတွင်း နေထိုင်လှုပ်ရှားသူများကို မစော်ကားပါ။)။ ဒါကြောင့် ကျုပ်ကိုကျုပ် တော်လှန်ရေးသမား အဖြစ်သတ်မှတ်ရန် ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေသည်။ နောက်တော်လှန်ရေးအတွက် တနေ့ ဘယ်နှစ်နာရီလုပ်သလဲလို့ ပြန်မေးတဲ့အခါ အနည်းငယ်သော အချိန်ကာလမျှသာ လုပ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် တော်လှန်ရေးသမား လုံးလုံးမဟုတ်ပါ။
နောက်ကျနော်တို့ သည်ဖက်ကမ်းမှာ ဘော်လန်တီယာ ဆိုတာ သိပ်ခေတ်စားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားများကလည်း ဘော်လန်တီယာ၊ ကျုပ်တို့ကလည်း အလကားခိုင်းလိုတဲ့အခါ ဘော်လန်တီယာ။ တော်လှန်ရေးဆိုတာလည်း ဘော်လန်တီရာလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်သူများလည်းရှိပါသည်။ လမ်းကြုံဝင်လုပ်သည့် အလုပ်ပုံစံမျိုး (သို့မဟုတ်) လုပ်အားအခမဲ့ပေးခြင်း (သို့မဟုတ်) ခိုင်းချင်သမျှ အခမဲ့ခိုင်းခြင်းမျိုးကို ဘော်လန်တီရာလို့ လွယ်လွယ်သတ်မှတ်လျှင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဘော်လန်တီရာ လုပ်သူများကို စော်ကားရာကြပါမည်။ သို့သော် လူအများနားလည်သည့် ဖတ်စာက ထိုသို့ထိုသို့ဖြစ်နေသည်။ တော်လှန်ရေးဆိုသည့် စကားကိုလည်း ဘော်လန်တီရာပါကွာလို့ ညှပ်သုံးကြသည့်အခါ သာ၍ပင်ဆိုးဝါးသွားတော့သည်။
နောက် ကျုပ်က တော်လှန်ရေးသမား၊ ဘော်လန်တီယာ ငွေစကားမပြောနဲ့ ဒီနေရာမှာ အကျိုးအမြတ်လာ မရှာနဲ့ဆိုသော စကားများ နားခါးလှပါသည်။ သို့သော် တွင်တွင်ကြီးသာ သုံးစွဲနေကြသည်။ တော်လှန်ရေးမှာ ပိုက်ဆံမရှိရင်၊ ဘော်လန်တီယာ အိမ်မှာ ဆန်မရှိရင် ဘယ့်နှယ့်များ လုပ်ကြမတုန်းလို့ တွေးမိပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျုပ်တို့ နှစ်တွေသာကြာလာ ပြောင်းလဲမှုဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုတိုင်တောင် မလုပ်နိုင်တဲ့ တော်လှန်ရေးသမားများ ဖြစ်လာရပါတယ်။
Posted by MrB at 6:39 PM
Its' cool !
Mr Balance ရဲ့ ရာဇ၀င်
Volunteer, Revolution & Money (ဘော်လန်တီယာ၊ တော်လှ...
The Title (နာမည်တစ်လုံး)